မုဆိုးလားသားကောင်လား | CeleTrend
ဆရာရယ်…ကျမ ဘယ်လောက် ဒက်စပရိတ် ဖြစ်နေသလဲ ဆိုရင်..ဆရာသာ ကျမကို ဒီဥစ္စာ ကူညီမယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဆရာ့ကို ကျမ ကိုယ်ကို ကျမ ထိုးအပ်..ဆရာ လိုရာသုံးစေ ဆိုပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အထိတောင် ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတာ အရှက်ကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ပြောပြပါရစေရှင်….” သူ့လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပြောနေတာပါ ။ “ အေးဗျာ……ခင်ဗျား ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေတာကို တွေ့ရတော့လည်း ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ငြင်းလို့ရမလဲလေ…အင်း……ဒီလိုလုပ်…..” “ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်..ဆရာ…ဆရာ ဖြစ်စေချင်တာကို ပြောလေ….” ငွေချေးတော့မယ့် ပုံ ပေါက်လာလို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အငို ရပ်သွားပြီး မျက်နှာလေး လန်းလာသည် ။ “ ဟိုဗျာ..ဒါ ခင်ဗျား ပြောလာလို့ ကျနော်လည်း ပြောတာနော်…ဟိုဒင်း..ခင်ဗျား ခုနပြောသွားတာ တကယ်လား…” “ ဘာလဲဟင်..ဆရာ..” “ လိုရာသုံးစေ ဆိုပြီး…..ထိုးအပ်မယ် ဆိုတာ…..” “ တကယ်..တကယ်ပြောတာပါ..ဆရာ လိုချင်တဲ့ အချိန်……အဲနီးတိုင်းမ် ပါ..ဆရာ….အဆင်သင့်ပါဘဲ…..ငွေ အဆင် ပြေတာနဲ့လည်း ပြန်ဆပ်ပါမယ်…ဆရာ….ကူညီပါ ဆရာ..ကယ်ပေးပါ…..” သူ့ပါးစပ်က ထွက်သွားတဲ့ စကားကို သူ့ဖါသာတောင် မယုံချင် ။ “ ခင်ဗျားမှာ နေရာ ရှိလား….” လို့ ပြောမိသွားသည် ။ “ နေရာ…..ဟို…တွေ့ကြဖို့လားဟင်….ဟုတ်..ဟုတ်……ရှိတယ်ဆရာ…ကျမ အမေက ဆေးရုံတက်နေရတာလေ..အိမ်မှာ ကျမ တယောက်ထဲ….ဆရာ…ကျမ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့လို့ ရတယ်…..” ကျော်စိန်ဘ စိတ်ရိုင်းတွေ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး ။
“ အိုကေ….လေ…..ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်..ခင်ဗျား ပြောတဲ့အတိုင်း အိုကေမယ် ဆိုရင် သွားကြတာပေါ့…ငွေကတော့ မနက်ဖန် မနက် ကျမှ ထုတ်ပေးလို့ ရမယ်…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါ….ဆရာ….” “ ကဲ..ကဲ..အချိန်ရှိတုံး..ခင်ဗျား အိမ်ကို သွားလိုက်ရအောင် . . ” ငွေချေးင်္ပြး အတိုး မနေနဲ့ ဒီအကိတ်ကြီးကို စိတ်ကြိုက် ဗြုံးခွင့်ရမယ် ဆိုတာကို တအား ကြိုက်သွားသည် ။ ဒီလို အပေးအယူနဲ့ ဗြုံးရတာကို ကျော်စိန်ဘတို့က တအား ကြိုက်သည် ။ သူသည် ကာမရာဂနဲ့ ပတ်သက်ရင် တအား လောဘကြီးတဲ့ လောဘသား တကောင် ဆိုတာကိုလည်း သူ့ဖါသာ သူ သိသည် ။ ထွေးထွေးရီလို ငယ်ငယ် တောင့်တောင့် အပေးကောင်း သဘောကောင်းလေး အိမ်ပေါ် ရောက်နေတာတောင် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လို အကိတ်ကြီးကို စားရမယ် ဖြစ်လာတော့ ပြေးပြီး စားပစ်လိုက်ချင်ပြန်သည် ။ စားသောက်ဆိုင်ထဲက အထွက်မှာ အိမ်က ထွေးထွေးရီ ဆီကို ဖုန်း လှမ်းဆက်လိုက်သည် ။ “ ထွေးရီရေ..ငါ ဒီည အိမ်မပြန်ဖြစ်ဘူး…မနက်ဖန်ကျမှ တွေ့မယ်…..” လို့ ..။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ငွေလိုချင်လွန်းလို့သာ လုပ်ရတာ ဖြစ်မည် ။ ရှက်သလိုလို ပုံစံနဲ့ စိတ်တွေ တအားကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံ ရှိသည် ။ တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေသည် ။ သူ့အိမ်ကို ရောက်ဖို့ ကျော်စိန်ဘကို လမ်းပြပေးနေတဲ့အခါ သူ့အသံတွေသည် သိသိသာသာ တုန်ခါနေသည် ။ “ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်….” “ ဆွေလို့ ခေါ်ပါလား..ကိုကျော်စိန်ဘ…..” “ ခင်ဗျား..အိမ်ထောင် ကျခဲ့ဘူးလား…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ခေါင်းခါပြသည် ။ “ မကျဖူးဘူး..ကိုကျော်စိန်ဘ…..” လို့ ပါးစပ်က တိုးတိုး ပြန်ဖြေသည် ။
“ ရည်းစားကော ရှိခဲ့ဘူးလား…..” “ ဟုတ်….ရှိခဲ့ဘူးတယ်…..” ကျော်စိန်ဘရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရည်းစားနဲ့တော့ အတွေ့အကြုံများခဲ့မှာပါ..ဒါကြောင့်လည်း ငါနဲ့ အိပ်ဖို့ ကို သူ ပါးစပ်က ပြောထွက်ရဲတာပေါ့..အတွေ့အကြုံကတော့ ကောင်းကောင်း ရှိပုံပေါက်တယ်…လို့ တွေးနေသည် ။ “ ကိုကျော်စိန်ဘကော..အိမ်ထောင် ကျခဲ့ဘူးလားဟင်….” “ မကျဖူးဘူး..မဆွေ…” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်တို့ နေတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားပြီ ။ သူတို့ အိမ်လေးက လမ်း အဆုံးက မီးရထား သံလမ်း နားက အုတ်တံတိုင်းနဲ့ ကပ်ရက်က အစွန်ဆုံး အိမ်လေး ဖြစ်သည် ။ အိမ်လေးဆီကို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က အရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး လျောက်သွားနေတဲ့ အချိန် ကျော်စိန်ဘသည် လမ်း ဓါတ်မီးတိုင်ရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နောက်ပိုင်း ကောက်ကြောင်းကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး လိုက်သွားနေသည် ။ သူ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေ သုံးနှုံးခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်မိသည် ။ “ တင်ကြုံစီးသည် ” ဆိုတာ…။ အခုလည်း ကျော်စိန်ဘသည် တင်ကြုံစီးပြီး လိုက်နေသည် ။ အိမ်တံခါးကို သော့ဖွင့်နေတာ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ လက်တွေ တုန်နေလို့ တော်တော်နဲ့ သော့ပေါက်ထဲ သော့တန် မရောက်နိုင်တာနဲ့ ကျော်စိန်ဘက ကူညီလိုက်ရသည် ။
အင်း…စော်ကြီး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေပြီ ။ သူလည်း ဒီလိုပါဘဲ ။ ဗျင်းရတော့မယ် ဆိုတာက သေချာနေပြီ ဆိုတော့ သူ့ငပဲက တအားကို ထကြွနေသည် ။ အိမ်လေးထဲမှာ မှောင်မဲနေသည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က မီးခလုပ်တွေကို တခြောက်ခြောက်နဲ့ လိုက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်လို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဧည့်ခန်းလေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ကိုကျော်စိန်ဘ..ထိုင်အုံးနော်..ခဏ…..“ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် တင်ပါးကြီးတွေ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ အတွင်းခန်းထဲကို ၀င်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖါလေးမှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်သည် ။ အိပ်ဖို့နေရာကို သွား ခင်းကျင်း ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်မည် လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးလိုက်သည် ။ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပြက္ခဒိန်တွေကို သူ လိုက်ကြည့်နေရင်း ငွေချေးတာကလည်း တခြားမှာ ဘယ်လိုမှ ချေးလို့ မရနိုင်ဘူးလား…လို့ စဉ်းစားနေမိသည် ။ သူက မိန်းမကြိုက်တဲ့ ဘဲကြီး ဆိုတာ သူ သိနေလို့ ဖြစ်မည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးကို အမြဲဝါးနေရမယ် ဆိုရင် တော်တော် ကောင်းသည် ။ သူသည် ထွေးထွေးရီကို ၀ါးလို့ ရနေပေမယ့် ဘေးမှာ လိုက်ပွဲ အသင့်ဆောင်ထားတာက ပို ကောင်းသည် ။ တခါတလေ ပစ္စည်းကောင်း စားရဖို့က မလွယ်ဘူး ။ “ ကိုကျော်စိန်ဘ …လာလို့ ရပြီ….” အတွင်းခန်းထဲက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် ထွက်လာသည် ။ အိုး …အိမ်နေရင်း ညအိပ်ဝတ် ဂါဝန်ရှည်ကြီးကို လဲလှယ် ၀တ်ဆင်ထားနေပြီ ။ သေချာတာက ဒီ ဂါဝန်အောက်မှာ ဘာ အတွင်းခံမှ ခံဝတ်မထားဘူး ။ ဟူး…..ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားစိုင် ထွားထွားကြီးတွေက လှုပ်တုပ်တုပ်နဲ့ …။ သူ့အနောက်က လိုက်သွားသည် ။ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း အနက် ဘယ်ဖက်က အခန်းထဲကို ခေါ်သွားသည် ။ ညအိပ် မီးလုံး ၀ါကျင်ကျင်လေးဘဲ ထွန်းထားတဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ တယောက်အိပ် ကုတင်လေး တလုံး ရှိနေသည် ။ မှောင်နေလို့များ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေသလား မသိဘူး ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က သူ့ကို ကုတင်ဆီကို ခေါ်သွားသည် ။
ကျော်စိန်ဘရဲ့ ဒုတ်က အဆင်သင့် မာကြော ထောင်မတ်နေပြီ ။ “ ဆွေ…ဆွေ့ကို ဘာလုပ်စေချင်လဲဟင်…..” ကုတင်ဘေးနားမှာ နီးနီးကပ်ကပ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်မိကြတဲ့ အချိန် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့အခါ ကျော်စိန်ဘလည်း “ ဆွေ့ရဲ့ အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်လိုက်..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကိုလည်း အမြန် ချွတ်လိုက်သည် ။ ည၀တ် ဂါဝန်ရှည်လေးကို တထပ်ထဲ ၀တ်ထားတာမို့ ချွတ်ပစ်တာက မကြာပါဘူး ။ တခဏ အတွင်းမှာဘဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်တာမို့ ကိုယ်လုံးတီးကြီး ဒုတ်ကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။ သူ့ဒုတ်ကြီးသည် လုံးပတ် တုတ်လွန်းသလို ရှည်လွန်းတာကြောင့် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဒါကြီးကို ကြောက်လန့်သလို ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားနဲ့ ငေးကြည့်နေသည် ။ “ ကဲ…ဆွေ ကုတင်ပေါ်ကို တက်..လုပ်ကြရအောင်…..” ပေါင်လုံး ဖြူတုတ်တုတ် ဖင်ကြီးကြီးနဲ့ ရေဆေးငါးကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျော်စိန်ဘ စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရတော့ ။ ဒုတ်ကလည်း ဘာနာသလဲ မမေးနဲ့ ။ ချက်ကို ကပ်နေပြီ ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က တင်းလုံးနေတဲ့ ရင်စိုင်ကြီး နှစ်မွှာပေါ်ကို ရောက်သွားကြသည် ။ ပွတ်သက်သလို ဆုပ်နယ်နေသည် ။ ရင်သီးလေးတွေက စူထွက်နေကြသလို မာတင်းနေသည် ။ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကာမစိတ်တွေကြောင့် လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်ပေါက်လေးထဲက အရည်ကြည်လေးတွေ ယိုစီး ကျနေကြပြီ ။
“ ဆွေ….ကိုယ်ံဟာကို စုတ်ပေးမလား…..” ကျော်စိန်ဘက သူ့ဒုတ်ကြီးကို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ လက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်သည် ။ “ ဟို..ဟိုလေ……ဆွေ…ဆွေ….ဆွေ…မစုတ်ဖူးဘူး…..” “ ဆွေ မစုတ်တတ်ရင် ကိုယ် သင်ပေးမှာပေါ့…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လီးကြီး အဆန့်မပြဲ ရောက်နေပြီ ။ိ“ စုတ်..စုတ်….မဆွေ..လျာနဲ့ ၀ိုက်ပြီး ကလိပေး….” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူ့လီးကို လျာနဲ့ ၀ိုက်ကစားပြီး စုတ်ပေးနေတဲ့အချိန် တင်းလုံးပြီး ခပ်တွဲတွဲကျနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို သူကိုင်နယ် ကစားနေသည် ။ စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ သုံးပြီး ချေပေးနေသည် ။ ဒီစော်ကြီးသည် သူ့ကို အထာပေးနေတာတော့ ကြာပြီ ။ ဒီလောက် မြန်မြန်နဲ့ ဒီအခြေအနေကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျော်စိန်ဘ မထင်ခဲ့ဘူး ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ ကော့ကော့ထိုးသွင်းနေရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆုပ်နယ်နေသည် ။ “ ဟူး…ကောင်းလိုက်တာ..စုတ်..စုတ်..ဒါ ပြီးရင် ခင်ဗျား စောက်ပတ်ကို ကျုပ် ယက်ပေးမယ်…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် လိင်ဆက်ဆံဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပေမယ့် လိင်တန်ကို စုတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိ ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ကျော်စိန်ဘ သိလိုက်သည် ။ သူက ဘယ်လို စုတ်ရမည် ဆိုတာကို သင်ပြတာတောင် သူမသည် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ ။ ဒါကြောင့် သူမကို စုတ်နေတာကို ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ပြီးတော့ သူမကို ဖင်ပူးတောင်း ထောင် ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ဖင်တုံးကြီးသူ ဖြစ်တာကြောင့် ဖင်ပူးတောင်း ထောင်လိုက်တဲ့အခါ ဖင်ကားကားကြီးတွေက ပိုကြီးသလို ထင်မှတ်ရပြီး ဖင်ကြီးတွေ ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်နေသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း ပက်လက် ပေါင်ကားခိုင်းပြီး ယက်ရတာထက် အခုလို ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ထားတဲ့အချိန် ပြူး ထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ရတာက ပိုကောင်းသည် လို့ ထင်ပြီး အခုလို ဖင်ပူးတောင်းထောင်တဲ့ ပုံစံကို လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါ ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံကို ချက်ချင်း လုပ်ပေးလို့ ကျော်စိန်ဘသည် ဒီမိန်းမ မဆိုးဘူး လို့ မှတ်ချက်ချသည် ။ ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီကို မယက်ခင် အရင် နမ်းရှုံ့လိုက်သည် ။
“ ဟင့်…ဘာလုပ်တာလဲကွယ်…..မနံဘူးလား….အားနာလိုက်တာ…..” “ ဟင်း..အဲဒီအနံ့ကို ကျုပ် ကြိုက်တာ….ဒီအနံ့က ကျုပ်ရဲ့ လိင်စိတ်ထကြွတာကို အမြင့်ဆုံးကို ရောက်သွားစေတယ်…” ပြောပြောဆိုဆို ကျော်စိန်ဘက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ခုံးဖေါင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ ယက်လိုက်သည်။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်ကော် ယက်လိုက်တာပါ ။ “ အိုး…….ဟင့်…..အမလေး………” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဖင်တုံးကြီးတွေ ရမ်းခါသွားရအောင် တုန်လှုပ်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးထားတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အနောက်ဖက်မှာ လေးဖက်ထောက်ရက် နဲ့ သူမ စောက်ဖုတ်အကွဲကြီးကို လျာနဲ့ ယက်နေတာမို့ ခွေးတွေ တကောင်နဲ့ တကောင် ဖင်ကို လျာနဲ့ ယက်နေ သလို ပုံစံ ဖြစ်နေသည် လို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ထင်မိလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း လျာနဲ့ ဆက်တိုက် ဖိဖိယက်ပေးလိုက်ရင်း စိတ်တအား ကြွလာတော့ စောက်ဖုတ်ကို ပြွတ်ကနဲ စုတ်ယူလိုက်သည် ။ “ ဟား…..” “ အိုး……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူမ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စောက်ဖုတ် အယက်ခံဘူးတာမို့ အတွေ့အကြုံသစ်ကို ထူး ဆန်း သဘောကျနေသည် ။ ငွေအများကြီးကို အပူတပြင်းလိုလို့ အကူအညီပေးတဲ့ ကျော်စိန်ဘကို သူ့လိုဘတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရပေမယ့် တကယ်တမ်း သူမကိုယ်တိုင်လည်း ယောက်ျားရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ငတ်မွတ် ငံ့လင့်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား ။ ရေငတ်တုံးေ၇တွင်းထဲကျလိုက်သလို လိုချင်တာတွေကို ကျော်စိန်ဘက ပေးစွမ်းနေပြီ ။ သူ့လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး အကွဲကြောင်းတလျောက် အပေါ်က အောက် အောက်က အပေါ် တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေသလို လျာထိပ်ချွန်နဲ့လည်း စောက်ဖုတ် အတွင်းထဲကို ထိုးပေးလာသည် ။
“ အိုး…အား…..အား……အား……….” ဖင်ကြီးတွေ တကြွကြွနဲ့ တအား အရသာထူးကဲနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကို ဒီလောက် နှူးနှပ်ပေးရင် တော်ပြီ လို့ ကျော်စိန်ဘ ယူဆသည် ။ သူမသည် ဖင်တကြွကြွနဲ့ စောက်ဖုတ် တအား ယားကြွနေပြီ ။ “ ကျုပ် ယက်တာတွေ ကြိုက်လား…မဆွေ…..” “ ကြိုက်….ကြိုက်တယ်..ကိုကျော်စိန်ဘ……” “ အင်း..ကြိုက်ရမယ်လေ..ကျုပ်က စေတနာ ပါတယ်ဗျ……ခင်ဗျားကို ကောင်းစေချင်တယ်..သိလား…” “ အင်း..ဟုတ်ကဲ့ပါ…..” “ ကဲ..ကျုပ်တို့ လိုးကြရအောင်ဗျာ……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကို ကုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်တ၀က် ပက်လက် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျော်စိန်ဘက ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း သူမ ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားစေသည် ။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးကာ မြှောက်ကိုင်လိုက်တော့ ပေါင်ကြားက အင်္ဂါစပ်ကြီးက ဖေါင်းပြူး အစ်ထွက်နေသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း ဒီမြင်ကွင်းကို စွဲမက်စွာနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး စိုက်ကြည့်နေလို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း “ အို..လုပ်မှာဖြင့် လုပ်လေ..ဘာလို့ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေတာလဲကွာ….” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း သူမ မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ထားလိုက်သည် ။ “ ခင်ဗျားရဲ့ အဖုတ်ကြီးက ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ပါဗျာ…” လို့ ကျော်စိန်ဘက ပြောလိုက်သည် ။ “ ဒီလိုဘဲ ကြည့်နေတော့မှာလား “ လို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ပြောပြန်တော့ ကျော်စိန်ဘလည်း “ လိုးပါပြီဗျာ..လိုးပါပြီ….” လို့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း သူ့လိင်တန်ကြီးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အကွဲကြောင်းကြီးကို အောက်က အထက် အထက်က အောက် လိုင်းဆွဲ ပွတ်တိုက်လိုက်သည် ။
လိင်တန်ထိပ် ဒစ်လုံးကြီးက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အစိလေးကို ထိပွတ်သွားတာမို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဆတ်ကနဲ တုန်သွားရသည် ။ သူ့လက်တဖက်က ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို လှမ်း ကိုင်လိုက်သည် ။ မာတင်း စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန် လိင်တန်ကို အင်္ဂါစပ်အပေါက်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ လုံးပတ်တုတ်လှတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းကြီး အတင်းကြီး တိုးဝင်လာတာက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင့်ကို အထူး အရသာ တွေ့သွားစေသည် ။ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတာ ဆိုတော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တအားကို တုန်ခါသွားရသည် ။ “ အို…….အမလေး….ကြီးလိုက်တဲ့ ဟာကြီး . .” ကျော်စိန်ဘက သူ့ပစ္စည်းကို ကြီးတယ် ပြောလို့ သဘောကျသွားသည် ။ တင်းကြပ်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို ဆက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ လိင်တန်တုတ်ကြီးဟာ တထစ်ထစ်နဲ့ ဗျစ်ကနဲ ထပ် ၀င်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘအတွက်လည်း တအားကြပ်လွန်းနေသည် ။ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ပြီး ဖိသွင်းတာတွေကို သုံးလေးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့တန်ဆာချောင်းသည် အင်္ဂါစပ်ခေါင်း ထဲမှာ လှုပ်ရှားလို့ ရလာသည် ။ ဖိဖိသွင်းတော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေလည်း ဆက်တိုက် ထွက်လာသည် ။ ကျော်စိန်ဘအတွက် အရာ ရှိသလို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အတွက်လည်း ထူး ကဲတဲ့ ကာမ အရသာထူးကို ရနေသည် ။ လိင် ဆက်ဆံခြင်းဟာ တဖက်ထဲ အတွက် မဟုတ်ဘဲ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း ယောက်ျားရော မိန်းမ ပါ ကောင်းကြတဲ့ ကိစ္စ တခု ပါလား ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံး တဖက်တချက်ပေါ်မှာ တင်ပြီး အားနဲ့ ဖိဖိ ဆောင့်ထည့်တဲ့အခါ တဖပ်ဖပ် အသံတွေနဲ့ အရည်လိုက်လာလို့ တခါတခါ ဖွတ်ဖွတ်ဖွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေကိုပါ ကြားကြရသည် ။
“ ကောင်းလား..မဆွေ…….ကျုပ် လိုးပေးတာ ကောင်းလား….” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ကာမအရှိန်တွေ တအား တက်နေပြီ ။ တစွပ်စွပ် လိုးထည့်ပေးနေတဲ့ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိုးချက်တွေကိုရော လုံးပတ်တုတ်တုတ် လီးကြီးကိုရော တအားကြိုက်နေသည်မို့ “ ကောင်း တယ်..တအား ကောင်းတယ်…..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘကလည်း “ လိုးပြီဗျာ..ကျုပ်လည်း တအားကို ကောင်းတယ်..ခင်ဗျား အဖုတ်က ရေလည် လိုးလို့ အရသာ ရှိတယ်…..” လို့ ပြောရင်း ဆက်တိုက်ဘဲ ဆောင့်ထည့် လိုးလေတော့သည် ။ “ အီး…တအား..တအားဆောင့်..ဆောင့်…ဆောင့်…အူး….အူး…….တအားကောင်းနေပြီ…အို…ဆောင့်ပါ…ဆောင့်ပါ……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်တယောက် အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်တော့မှာမို့ သွေးရူးသွေးတန်းတွေ ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကို ကျော်စိန်ဘ သိတာကြောင့် တအား ဆက်တိုက် ဆောင့်ထည့်သည် ။ ထမ်းထားတဲ့ သူမ ပေါင်တွေကို ပြန်ချလိုက်ပြီး အားနဲ့ ဖိဖိဆောင့်တာ ။ ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ် အသံတွေ နဲ့ ကျယ်လောင်တဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေဟာ ကျော်စိန်ဘရဲ့ အသက်ရှူသံ ပ်ြငးပြင်းတွေနဲ့ အတူ ထွက်ပေါ်နေသည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် အင်္ဂါစပ် ကြွက်သားတွေကို တအားညှစ်လိုက်တာကြောင့် ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိင်တန်ကို တအားဆုပ်ညှစ်တဲ့ ကြပ်တည်းတဲ့ ခံစားမှုနဲ့အတူ ကျော်စိန်ဘ တအားကောင်းလွန်းလာလို့ ပြီးခါနီးဆဲဆဲ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အရင် ပြီးသွားသည် ။ “ အမလေး..အမလေး…ကောင်းလိုက်တာ…အို…အို…..ကောင်းလိုက်တာ…….အား…….အား…..” လို့ အော်ရင်း ပြီးသွားသည် ..။
ကျော်စိန်ဘလည်း ဆက်တိုက် ဆက်ဆောင့်လိုက်သည် ။ သူလည်း တအားကောင်းတက်သွားပြီး သုတ်တွေ တအားပန်းထွက်သွားပြီး ပြီးသွားသည် ။ “ အား……အား…..အား……..ဟင်း…ဟင်း………..ဟင်း………..အိုး………” “ ကိုကျော်စိန်ဘ…..ရှင့်ဟာကို မထုတ်နဲ့အုံး……” အရေးထဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က သူ့ကို တဆုံး ဆက်သွင်းစိမ်ထားဖို့ ပြောနေပြန်သည် ။ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ပြီ ။ ကျော်စိန်ဘ ရေချိုးနေသည် ။ အလုပ်က ခွင့်ယူထားသည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်နဲ့ အပြတ်ကဲလိုက်လို့ သူ့တကိုယ်လုံး နုံးချိနေသည် ။ ကာမ ဆန္ဒ ပြင်းထန်လိုလားနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် ဖြစ်သွားလို့ ကျေနပ်နေသည် ။ ငွေလိုတာလည်း ငွေရ..ကာမဆန္ဒလိုတာလည်း ကာမဆန္ဒ ပြည့်ရလို့ပါ ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထွေးထွေးရီက နွေးထွေးတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ကြိုနေသည် ။ သူ့ကို ပြာပြာသလဲ ဂရုစိုက်သည်။ သူ ဘယ်သွားသည် ဘာလုပ်သည် ဆိုတာတွေကို မမေး ။ စပ်လည်း မစပ်စု ။ ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ထားသည်.. အကိုကြီး စားချင်တဲ့အချိန် ပြောပါတဲ့ ။ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး ရေပူပူတွေ တဝေါဝေါ ကျနေတဲ့ ရေပန်းအောက်မှာ မျက်စိပိတ် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေချိုးလိုက် သည် ။ “ အကိုကြီး…..” ဟင်…ထွေးထွေးရီ သူ့ဆီ ရောက်လာတာ ။ ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။ ထွေးထွေးရီသည် ကိုယ်ပေါ်မှာ အ ၀တ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ကပ်မနေ ။ ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ၀င်လာတာ ။ “ အကိုကြီးကို ချေးတွန်းပေးဖို့ လာတာပါ..” လို့ ထွေးထွေးရီက ပြောလိုက်ရင်း သူ့ကျောပြင်ကို ထွားလုံးတင်းနေ တဲ့ ရင်သားစိုင်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ ဖိကာ ပွတ်ပေးတော့သည် ။ ကျောပြင်ကို ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ရင်သားကြီးနှစ်လုံးက ချောမွတ် ပွတ်တိုက်နေသည် ။ထွေးထွေးရီရဲ့ လက်တဖက်ကလည်း သူ့ရင်ဘတ်ကို လာပွတ်နေသည် ။ “ ခံလို့ ကောင်းလားဟင်..အကိုကြီး…..” “ အင်း….ကောင်းတယ်…” ထွေးထွေးရီက သူ့လက်တဖက်ကို ဆွဲယူကာ သူမပေါင်ကြားထဲကို ပို့ပေးလိုက်သည် ။ သူမ ကိုင်စေချင်တဲ့နေရာကို ပို့ပေးလိုက်တာ ။ သူ့လက်သည် ထွေးထွေးရီရဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီးပေါ်ကို ရောက်နေသည် ။ အမွှေးပါးပါးနဲ့ ဖေါင်းအိနေတဲ့ ထွေးထွေးရီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ကိုင်မိရတော့ သူ့စိတ်ရိုင်းတွေက ထိန်းကနဲ ထကြွလာရတော့တာဘဲ ။ ဘယ်လောက်ဘဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်နဲ့ တညလုံး ဆွဲထားထား..ထွေးထွေးရီရဲ့ နို့ကြီးတွေနဲ့ကျောကို ပွတ်နေကထဲက သူ့လိင်တန်သည် တမဟုတ်ချင်း ကြီးလာထွားလာ ရှည်ထွက်လာခဲ့ပြီး အခုလို သူက ထွေးထွေးရီရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို ကိုင်လိုက်တော့ တအားကို ထကြွ ထောင်မတ်လာသည် ။
“ ဟိ..အကိုကြီး ထလာပြီ …….ဒုံးပျံကြီး ပစ်ဖို့ ရယ်ဒီ ဖြစ်တော့မယ်…..ခိခိ…..” ထွေးထွေးရီက သူ့လိင်တန်ကို ထိပ်ပိုင်းကနေ ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။ ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ရှေ့နဲ့နောက် ပွတ်တိုက်ပေးသည် ။ “ အူး……အား…အား…….ထွေးထွေးရီ…နင်..တတ်လည်း တတ်နိုင်တယ်ဟာ….ငါ့ မထထအောင် လာဆွနေတယ် . . .” ထွေးထွေးရီက ပြုံးစိစိနဲ့ မတ်မတ်ထောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို ကွင်းတိုက် ကစားပေးနေရာက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ချလိုက်ပြီး ထိပ်ဖူးကားကြီးကို ငုံကာ စုတ်လိုက်လေသည် ။ “ ဟေး…အိုး……..နင်…နင်….လုပ်လည်း လုပ်တတ်တယ်…” ထွေးထွေးရီသည် လိင်တန်ကြီးကို အားရပါးရ စုတ်နေပြီ ။ ထွေးထွေးရီရဲ့ အစုတ်သည် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ထက် ပို သာတာက အမှန်ဘဲ ။ သူ့လိင်တန်ကြီး အစွမ်းကုန် တင်းမာပြီး ထွေးထွေးရီရဲ့ အစုတ်အယက် ကလိချက်တွေကြောင့် တအားထန်တင်းနေပြီ ။ ထွေးထွေးရီကို နံရံမှာ လက်နှစ်ဖက် ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ခြေထောက်တွေကို ကားခိုင်းလိုက်သည် ။ ဖင်တုံးတွေ ကြားက ပေါ်လာတဲ့ စောက်ဖုတ်အမြောင်းထဲကို လိင်တန်တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အား……” ထွေးထွေးရီရဲ့ အော်သံလေး ထွက်လာသည် ။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး ဖိဖိထိုးညှောင့်ပစ်လိုက်သည် ။ “ အား…..အား….အား…..” “ ဖပ်..ဖပ်…ဖပ်..ဖပ်……..” ထွေးထွေးရီက ကုတင်ပေါ် ရွှေ့ကြရအောင် အကိုကြီး…လို့ ပြောသည် ။ ကုတင်ပေါ် ရောက်တော့ “ ကျမ အပေါ်က တက်ပါရစေ ” လို့ ပြောတာကြောင့် ပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ထွေးထွေးရီလည်း ပေါ့ပါးစွာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်လာသည် ။ မာကျောတင်းထောင်နေတဲ့ သူ့လိင်တန်အပေါ်ကို ခွထိုင်လိုက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ လိင်တန်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး သူမ စောက်ဖုတ်မှာ တေ့လိုက်တဲ့ ထွေးထွေးရီသည် ကာမစိတ်တွေ တော်တော် ပြင်းထန်နေပုံရသည် ။ နှာတန်အဖျားနဲ့ ပါးပြင် နားရွက်တွေ နီရဲနေသည် ။ လိင်တန်ပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန် တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းလိုက်တဲ့အသံတွေ ထွက်လာသည် ။ “ အိုး..ကျွတ်..ကျွတ်…..” ထွေးထွေးရီသည် သူမ စိတ်ကြိုက် ဖိဖိညှောင့်တော့တာဘဲ ။ ကျော်စိန်ဘလည်း အောက်ကနေ ပင့်ကော့ ထိုးပေးသည် ။
ဆောင့်အချနဲ့ ပင့်အထိုး စည်းချက်ညီနေသည် ။ တစွပ်စွပ် တဖပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ “ အား……အား…ကောင်းလိုက်တာ…အကိုကြီးရယ်…..” သူ အားမရတာကြောင့် ထွေးထွေးရီကို ပက်လက်ပေါင်ဖြဲခိုင်းလိုက်ပြီး အားနဲ့မာန်နဲ့ တက် ဆောင့်တော့မှ တအား ကောင်းသွားပြီး သူရော ထွေးထွေးရီကော ပြိုင်တူလို ပြီးသွားကြရသည် ။ ပက်လက်လှန်ပြီး အမောဖြေနေခိုက် ထွေးထွေးရီဆီက ထူးဆန်းတဲ့ စကားတွေကို သူ ကြားလိုက်ရသည် ။ “ အကိုကြီး…..အကိုကြီးနဲ့ ကွဲသွားခဲ့တဲ့ ခင်နှင်းဆီကို အကိုကြီး လိုက်ရှာသေးလားဟင်…..” တဲ့…။ ကျော်စိန်ဘလည်း ထွေးထွေးရီ ကို ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ “ ရှာတာပေါ့….ဘယ်ကို ရောက်သွားသလဲ မသိတော့ဘူး…..” “ အကိုကြီးရဲ့ ရင်သွေးလေး တနေရာရာမှာ ရှိနေမှာဘဲနော်…” “ အင်း…..” “ အကိုကြီး…ပြန်တွေ့ချင်လားဟင်……” “ ထွေးထွေးရီ..နင်..ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ…..ငါ့စိတ်တွေကို ကြေကွဲထိခိုက်အောင် လာလုပ်မနေနဲ့…..ငါ တွေ့ချင်တာပေါ့..ခင်နှင်းဆီကို ငါ တကယ် ချစ်ခဲ့ကြိုက်ခဲ့တာ….” “ အော်..အကိုကြီးရယ်…ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ…ဒါနဲ့များ ..သူ့ကို ထားပြီး နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားရတယ်လို့…” “ အေး..အဲ့တုံးက ငါက ကလေးမယူချင်ဘူးဟ…ငါက တကယ်ဆို ပျော်လို့ အားမရသေးတာ..ငါ မှားပါတယ်… ငါ့ရဲ့ မိုက်မဲချက်တွေပေါ့ဟာ…” ထွေးထွေးရီလည်း မထင်တာတွေ ကြားရလို့ အံ့သြနေသည် ။ “ ဒါဆို ခင်နှင်းဆီကို ပြန်တွေ့ရင် အကိုကြီး လက်ခံမှာလား….” “ အင်း..လက်ခံမှာပေါ့…” “ ဟင်..ဒါဆို..ထွေးထွေးရီကို ဘယ်လို လုပ်မလဲဟင်….အကိုကြီးက ထွေးရီကို ကန်ထုတ်လိုက်တော့မှာလား..” ထွေးထွေးရီက ပြုံးစိစိနဲ့ မေးလိုက်တာပါ ။
ကျော်စိန်ဘက ထွေးထွေးရီရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးကို သူ့လက်ဖ၀ါးကြီးနဲ့ ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်း “ နင့်ကို ငါ ဘယ်ကန်ထုတ်မလဲ..နင့်ကို ငါ အရံထားမှာပေါ့….ခင်နှင်းဆီကို လိုးလိုက်..နင့်ကို လိုးလိုက်..တခါတလေ နှစ်ယောက်စလုံးကို တချိန်ထဲမှာ လိုးလိုက်နဲ့…ဟားဟားဟား……” လို့ ပြောရင်း ရယ်မောလိုက်တဲ့အခါ ထွေးထွေးရီလည်း..“ ဟာ…အကိုကြီး..တအားဆိုးတာဘဲကွာ….” လို့ ပြောရင်း ကျော်စိန်ဘရဲ့ ချွေးတွေ စိုနေတဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို လှမ်း ၇ိုက်လိုက်သည် ။ “ ဟားဟားဟား….” ဒီနေ့ ရုံးကို ရောက်တော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တယောက် ဘယ်လိုနေသလဲ ဆိုတာ ကျော်စိန်ဘ သိချင်သည် ။ မနေ့က ဘဏ်ကနေ သူမ လိုတဲ့ ငွေတွေကို ကိုယ်တိုင် လိုက်ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ ငွေက တော်တော် များပေမယ့် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကြီးကို အပေါက်စုံအောင် လိုးခွင့်ရတာကိုလည်း ကျော်စိန်ဘ အင်မတန် ကျေနပ်နေသည် ။ ဆက်ဆက် ပြန်ဆပ်ပါမယ် လို့ အတန်တန် အထပ်ထပ် ဂတိပေးနေတဲ့ သူမကိုလည်း ယုံမိသည် ။ အတိုး တပြားမှ သူ မယူလိုဘူး ။ သူမက သူလိုတဲ့အချိန် သူ့လီးကို အားရပါးရ စုတ်ပေးတာတွေနဲ့ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးပြီး စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်သလို လုပ်ပါတော့ လို့ စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ စအိုပေါက်ကို သူ့ကို ထိုအပ်တာတွေနဲ့တင် သူ ကျေနပ်နေပါပြီ ။ သူ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။ ဟင်….ဖုန်းပိတ်ထားတာလား…။ ခေါ်လို့ မရဘူး….။ သူ့ရုံးဖုန်းကို ရုံးက ဖုန်းစာအုပ်မှာ ကြည့်သည် ။ ခေါ်ကြည့်သည် ။ မရဘူး ။
သူ့လက်အောက်က စာရေးကလေး အောင်ဇင်မိုး ကို လှမ်းခေါ်ပြီး “ ဟေ့ကောင်..အပေါ်ထပ်က ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် သိတယ် မဟုတ်လား….မင်း သူ့ဆီ တက်သွားလိုက်ပြီး ငါ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်ဖို့ သွားပြောစမ်းကွာ…” လို့ ခိုင်းလိုက်သည် ။ “ ဟေ့ကောင် …” အောင်ဇင်မိုး လှည့်ကြည့်သည် ။ “ သူ့စားပွဲမှာ မတွေ့ရင် သူ့ကို လိုက်ရှာကွာ….” လို့ သူ ထပ်ပြောလိုက်သည် ။ အောင်ဇင်မိုးက “ ဟုတ်..” လို့ မျက်နှာပုတ်ပုတ်နဲ့ ပြန်ပြောပြီး ရုံးခန်းထဲက ထွက်သွားသည် ။ “ ဆရာ….” ကျော်စိန်ဘ အလုပ်ထဲကို စိတ်ဝင်စားနေရာက ခေါ်သံကြောင့် မော့ကြည့်လိုက်သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်း….။ အို…အလှဖိရားမလေး….လှလိုက်တာ အရမ်းပါဘဲ….။ “ ခေါ်ပြန်ပြီလား…..ဆရာလို့..” ကျော်စိန်ဘရဲ့ အသံက လူငယ်လေး တယောက်လိုဘဲ ။ “ ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲလို့….ဦး…လား…..” ရွှန်းရတီမွန်းရဲ့ စိုက်ကြည့်တဲ့ ဒါဏ်ကို သူ မခံနိုင်ဘူး..။ သူ့အသဲနှလုံးတွေကို ထိုးဖေါက်သွားတဲ့ အကြည့်လို့ သူ တင်စားလိုက်သည် ။ “ ဘယ်လိုလဲ….ရွှန်းရတီ…ကိုယ်နဲ့ ဒီညနေ ထွက်မှာလား…..” ရွှန်းရတီမွန်းက တိုးတိုးလေး…“ ထွက်ချင်တာပေါ့ ဦးရယ်…..ဦးရဲ့ စေတနာတွေကို ရွှန်းက တကယ် တန်ဖိုးထားပါတယ်..ရွှန်းကို တအား ဂရုစိုက်တယ် ဆိုတာ ရွှန်းသိတာပေါ့…..ရုံးမှာ တနေကုန် အလုပ်လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ ချွေးတွေသန်တွေနဲ့..ဦးနံမှာကို ရွှန်းစိုးတယ်..အားနာတယ်…..ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ပါဘူး…..”လို့ ပြောသည် ။
“ ဒါအတွက် မပူပါနဲ့..ရွှန်းက စနေနေ့ ထွက်လို့ မရဘူး ဆိုလို့ပါ…ရွှန်း အ၀တ်တစုံ အပို ထည့်လာခဲ့လေ…ကိုယ်က ဟိုတယ်ခန်း အကောင်းစား ငှားထားမယ်….ရုံးက ထွက်ထွက်ချင်း ရွှန်း ရေ၀င်ချိုးလိုက်ပေါ့….” “ အို..ဟိုတယ်….ရွှန်းကြောက်တယ်..မသွားရဲပါဘူး..ဦးရယ်……ရှက်စရာကြီး…….” “ ဒါတော့ ရွှန်းသဘောပါ..ရွှန်း မသွားချင်တာကို ကိုယ်က အတင်းကြီး ခေါ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး…” ကျော်စိန်ဘလည်း မျက်နှာညှိုးတဲ့ ပုံနဲ့ ခေါင်းငုံ့လိုက်သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက “ ဦး..ရွှန်းကို စိတ်ဆိုးသွားလားဟင်…..” လို့ မေးသည် ။ “ မဆိုးပါဘူး..ဦးက ရွှန်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ချင်တာလေ..ရန်ကင်းထိပ်က လဖက်ရည်ဆိုင်မှာဘဲ ပူပူလောင်လောင် လူတွေ ကြားထဲမှာဘဲ တွေ့ပေါ့..ရပါတယ်လေ…..” “ ဟိတ်..ဦး…ရွှန်းကို စိတ်ကောက်သွားတာလား…..” “ ဟင့်အင်း…” “ ဦး သဘော..ဦး သဘော…..ရွှန်း ဦး ခေါ်တဲ့နေရာကို လိုက်မယ်…..ကျေနပ်လား…..” “ အင်း…..” ရွှန်းရတီမွန်း ရုံးခန်းထဲက ပြန်ထွက်သွားတော့ တပည့်လေး အောင်ဇင်မိုး ပြန်ရောက်လာသည် ။ “ ဆရာ…..ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အလုပ် ထွက်သွားပြီ တဲ့…..” “ ဘာ….” “ ဟုတ်တယ် ဆရာ….အလုပ်ထွက်စာ တင်ထားတာ ၂ပတ်ရှိပြီ..မနေ့က သူ့နောက်ဆုံးနေ့တဲ့..” “ ဘာ…..” “ ဟုတ်ရဲ့လားကွာ…မင်းကလဲ…သေချာရဲ့လား….” “ သေချာပါတယ်…ဆရာ…” ဟိုက်….ဘယ်လိုကြီးလဲ…။ ညနေ ရုံးဆင်းချိန်မှာ ရွှန်းရတီမွန်းကို သူ ကြိုတင် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကို ခေါ်သွားသည် ။
ပထမတန်းစား ဟိုတယ်ခန်းလေးကို ဈေးကြီးပေးပြီး ယူထားသည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက ဒီလိုနေရာမျိုးကို ယောက်ျား တယောက်နဲ့ တခါမှ မလိုက်ဖူးလို့ ရွက်ရွံ့ကြောက်လန့်နေတဲ့ အမူအရာလေးနဲ့ ခေါင်းလေး ငုံ့ပြီး လိုက်လာသည် ။ ဒီနေ့ မနက် ရုံးက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တယောက် အလုပ်က ထွက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းသာ မကြားရမသိရရင် ဒီအချိန်သည် ကျော်စိန်ဘ အတွက် တအားကို ပျော်စရာ ဖြစ်နေလိမ့်မည် ။ အခုတော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တယောက် ဖုန်းလဲ မထူး..အလုပ်ကလည်း အပြီး ထွက်သွားတဲ့ဟာကြီးက သူ့ခေါင်းထဲမှာ တချိန်လုံး ရှိနေသည် ။ ဘယ်လိုမှ မေ့ဖျောက်ပစ်လို့မှ မရနိုင်ဘဲ ။ ရွှန်းရတီမွန်းလေးကို အရေးကြီးတဲ့ စကားတွေ ပြောစရာ ရှိတယ် ဆိုပြီး ဟိုတယ်ခန်းကို ပင့်လာပေမယ့် ကျော်စိန် ဘသည် ဘာ စကားကိုမှ မပြောဘဲ ရောက်တာနဲ့ ကုတင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းပြီး ရွှန်းရတီမွန်းကို တအားဖက် တအားနမ်းလေတော့သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက “ ဦး…ရွှန်းကို တကယ် ချစ်တာလားဟင်….” လို့ မေးလိုက်တဲ့အခါ ကျော်စိန်ဘလည်း အလွယ်တကူဘဲ “ အရမ်းချစ်တာပေါ့..ဦးက ရွှန်းကို စွဲလန်းလွန်းလို့ အသဲတွေကို ကျွမ်းလုလုဘဲ”လို့ ပြောလိုက်သည် ။
“ ရွှန်းကို တသက်လုံးပေါင်းဖို့ လက်ထပ်မှာလား..” လို့ မေးပြန်တော့လည်း “ ရွှန်းရယ်.. ကိုယ်က အပျော်အပျက် လုပ်နေတယ်လို့ ထင်နေတာလား..တကယ်ချစ်လို့ တကယ် လက်ထပ်မှာပေါ့လို့..” လို့ ပြန်ပြောရင်း ရွှန်းရတီမွန်းရဲ့ အ၀တ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ခွာဖို့ ကြိုးစားတော့သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက “ ဦး….ရွှန်းပြောထားသလိုဘဲ တနေကုန် ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ထားတော့ ချွေးနံ့တွေ နံစော်နေတဲ့ အ တွက် ရွှန်း..စိတ်အိုက်တယ်…စိတ်မသန့်ဘူး…ရွှန်း ရေမိုးချိုးချင်တယ်ကွယ်…နံစော်ရင် မကောင်းဘူး… ဦးကို ရွှန်း သိပ် အားနာတာ…ရွှန်း ရေချိုးပါရစေနော် ..” လို့ တောင်းပန်သည် ။ ဘရာစီယာလေးသာ ကျန်နေတဲ့ ရွှန်းရတီမွန်းရဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ကျော်စိန်ဘ ငေးမော စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း..“ အိုကေလေ…ဒါကြောင့်လည်း ရေချိုးခန်း အပျံစား နဲ့ ဒီဟိုတယ်ကို ဦးက ကြို ငှားခဲ့တာပေါ့ …” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်ထဲက ရွှေဂုန်တိုင်က ဒီဟိုတယ်မှာ အခုလို တွေ့ကြမယ့်အကြောင်း ရွှန်းရတီမွန်းကို သူ ကြိုပြောပြခဲ့သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းကို ညနေတိုင်း သူ ညစာကျွေးပြီး အိမ်သားတွေ အတွက်လည်း စားစရာ ပါဆယ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်သည် ။ မနေ့က ဆိုရင် ကုန်တိုက်တခုကို ၀င်ပြီး ရွှန်းရတီမွန်းအတွက် လက်ကိုင်အိတ်တွေ ဖိနပ် တွေ အများကြီး ၀ယ်ပေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် ဒိုးသွားတာကို လိုက် မစုံစမ်းဖြစ်သေးဘူး ။ စိတ်ထဲမှာခိုးလိုးခုလု ဖြစ်နေသေးသည် ။ ဒါပေမယ့် ရွှန်းရတီမွန်းလေးကို အခွင့်သာတုံး စားလိုက်အုံးမည် ။ “ ကဲ ဦး..ခဏ စောင့်နော်..ရွှန်း ရေအမြန်ချိုးလိုက်အုံးမယ် . . ” လို့ ပြောပြီး ရွှန်းရတီမွန်းသည် ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်သွားသည် ။ အိုး…လှလိုက်တဲ့ အိုးကလေး …။
ဟီး…စားရချည်သေးရဲ့ …။ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် လှဲလျောင်းရင်း ကုတင်ဘေးက ကုလားထိုင်ပေါ် ပစ်တင်ထားတဲ့ သူ့တိုက်ပုံဆီကို လက် ရောက်သွားသည် ။ တိုက်ပုံအိတ်ထဲက ကွန်ဒုံးအထုပ်ကြီးကို ထုတ်ယူလိုက်သည် ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သုံး တဲ့ အဆီပုလင်းလေးရော ။ သူ့ပေါင်ကြားကဒုတ်က တအားကို ထွားတက် ကြီးထွား မာကြောနေသည် ။ မကြာခင် စားရတော့မှာမို့ပေါ့ ။ ရွှန်းရတီမွန်းလေး ရေချိုးနေတဲ့ ရေသံတွေကို တရှဲရှဲ ကြားနေရသည် ။ ကိုယ်တုံးလုံးလေး ဖြစ်နေမယ့် ရွှန်းလေး ကို မြင်ယောင်ကြည့်နေသည် ။ သူ့ဒုတ်က တအားကို ထကြွနေသည် ။ ချောက်….။ ရေချိုးခန်း တံခါး ပွင့်လာသည် ။ ဆံပင်ရေစိုလေးကို တဘက်နဲ့ သုတ်ရင်း ထွက်လာတဲ့ ရွှန်းရတီမွန်းသည် ကိုယ် လုံးမှာ တဘက်တထည်ကို ပတ်ချည်ထားသည် ။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေက ၀င်းထင်းနေသည် ။ ရင်ညွန့်ဖွေးဖွေး ပခုံး သားဖွေးဖွေးတွေကလည်း ၀င်းထင်းနေသည် ။ “ ဦး….ရွှန်း တအား ရှက်မိနေတယ်ကွာ….ရွှန်း ဦးနောက်ကို လိုက်ခဲ့မိတာ မှားပြီလား မသိဘူး …” ဒီအချိန်မှာ ဟိုတယ်ခန်းကို အပြင်ကနေ လာခေါက်သည် ။ ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်… ( ဆရာ..ဆရာ..ကျနော် ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းပါ…..ခဏလေး …တံခါးဖွင့်နိုင်မလား….) ကျော်စိန်ဘ ဖီးငုတ်သွားသည် ။ “ ဟေ့….ဘာလဲကွာ..နောက်မှ လာခဲ့…” “ အရေးကြီးလို့ပါ ဆရာ..ခဏလေး….ခဏလေးပါ….” ကျော်စိန်ဘ ဒေါသထွက်သွားသည် ။ တံခါးကို ဖွင့်ပေမယ့် ဟရုံလေး ။ ရွှန်းက မလုံ့တလုံ ဖြစ်နေတယ် မ ဟုတ်လား …။ တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အပြင်က လူတွေ တပုံကြီး အတင်းတွန်းပြီး ၀င်လာကြသည် ။
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း မန်နေဂျာ ကောင်လေး တင် မကဘဲ လူတွေ တပုံကြီး ။ တိုက်ပုံဝတ်တွေရော….. …. ရဲယူနီဖေါင်းတွေရော….ငိုယိုနေတဲ့ မိန်းမကြီးတွေရော….။ “ ဘာတွေလဲ..ခင်ဗျားတို့က ဘယ်သူတွေလဲ…ဘာကြောင့် အတင်းကြီး ၀င်လာတာလဲ….” ကျော်စိန်ဘက မေးလိုက်တဲ့အချိန် ရွှန်းရတီမွန်းသည် စောစောက ဆံပင်ကို ရေသုတ်နေတဲ့ တဘက်လေးကို ရင် မှာ လွှားလိုက်ပြီး တအီးအီးနဲ့ ငိုနေသည် ။ ယူနီဖေါင်းဝတ် ရဲက “ ဒါတွေက ဒီက မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ဦးလေးတွေ..သူတို့ရပ်ကွက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ…ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောချင်ကြလို့ လာခဲ့ကြတာ…ခင်ဗျားက လူကြီးလူကောင်း အရာရှိတယောက် ဆိုရင်…အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးလိုက်ပါဗျာ..ကျနော်တို့က ဘေးက ၀ိုင်းဝန်းကြတဲ့ သဘောပါ..ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်း ပြေလည်ကြရင် ပြီးတာဘဲ…..” လို့ စပြောလိုက်သည် ။ ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့ ပိန်ပိန် အဖိုးကြီးတယောက်ကတော့ “ မင်း..ငါ့သမီးလေးကို လုပ်ရက်တယ်ကွာ..တကယ်ဆို မိသား ဖသား ပီပီ လာတောင်းရမ်းပြီး လက်ထပ်ဖို့ကောင်းတယ်….” လို့ နီရဲနေတဲ့ မျက်နှာကြီးနဲ့ အော်ပြောလိုက်သည် ။ သူ့မိန်းမလို့ ထင်ရတဲ့ ခပ်၀၀ မိန်းမကြီးကလည်း..“ ဟုတ်ပတော်…ကျုပ်သမီး နုနုထွတ်ထွတ်လေးကို စော်ကားရက် တယ်….ကဲ.ဘယ်လို လုပ်ပေးမလဲ..” လို့ ဘေးက ၀င်အော်သည် ။ “ ကျနော်တို့…စကားပြောကြဖို့ ဒီဟိုတယ်ခန်းကို လာကြ…” “ ဟေ့….ဘာစကားပြောတာလဲ…ကြည့်စမ်း…ကွန်ဒုံးထုပ်နဲ့ အဆီပုလင်းနဲ့..ဒါလား ထိုင် စကားပြောမယ့်ကောင်..” ရွှန်းရဲ့ ဦးလေး ဆိုတဲ့ လူကြီးက လက်သီးဆုပ်ကြီး ရွယ်ရင်း အနားကို တိုးကပ်လာသည် ။ ဆွဲကြလွဲကြနဲ့ ဆူညံနေသည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက “ အီးဟီး..ဦးက ရွှန်းကို တကယ် ချစ်တာပါ..အတည်လက်ထပ်မယ်တဲ့..ဦးကို ရန်မလုပ်ကြပါနဲ့” လို့ အော်ပြောသည် ။ ရဲသားကြီးကလည်း “ ပြေလည်အောင် လုပ်ကြပါဗျာ..” ဆိုတာကို အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်နေသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း ချွေးပြန်နေပြီ ။
ခေါင်း အကြီးအကျယ် မီးတောက်နေပြီ ။ “ ကဲ..ကဲ..ရပ်ကွက်ရုံးကို လိုက်ခဲ့ကြ….” ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခေါ်သည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းက “ ရှက်တယ်…ရှက်တယ်….အီးဟီး…..ဘယ်လို မျက်နှာနဲ့ ရပ်ကွက်ရုံးကို လိုက်ရမလဲ…” လို့ အော် ပြီး ငိုသည် ။ ကျော်စိန်ဘသည် သူ့ဆီကို အကုသိုလ်သည် တကိုယ်တည်း မလာဘဲ အဖေါ်အပေါင်းနဲ့ လာနေပြီ လို့ စဉ်းစားလိုက်သည် ။ “ ကဲ ပြေလည်အောင် ညှိပေးကြပါဗျာ……” လို့ သူ ပြောလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘ ညစ်ညူးတဲ့ စိတ်နဲ့ အိမ်ကို ပြန်လာသည် ။ ရွှန်းရတီမွန်းရဲ့ မိသားစုကို ရွှန်းရတီမွန်းကို မကြာခင် ခန်းခန်းနားနား လက်ထပ်ပါမည် လို့ လူကြီးစုံရာ သက်သေတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ဂတိပေးလာရသည် ။ တကယ်ဆို သူသည် ရွှန်းရတီမွန်းကို လက်ကလေးတောင် မကိုင် ရသေး ။ ရေချိုးခန်းထဲက တဘက်လေးပတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ရွှန်းရတီမိုး ကြောင့် သူနဲ့ ချစ်စခန်းဖွင့်ပြီးကြပြီလို့ အားလုံးက စွပ်စွဲကြသည် ။
ရွှန်းရတီမွန်းကလည်း ဟုတ်သယောင် သံယောင်လိုက်ပြီး တအီးအီး ငိုကြွေးပြလိုက် သည် ။ိအိမ် အပြန်လမ်းမှာ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ခေါင်းထဲကို ရောက်လာတာနဲ့ သူ့အိမ်ဖက်ကို ကွေ့ဝင်လိုက်သည် ။ အိမ်တံခါးကြီး သော့တွေ ခတ်ထားတာ တွေ့လို့ ဘေးအိမ်တွေကို မေးကြည့်တော့ “ ဒါ ငှားထားတဲ့အိမ်…အခု ပြောင်းသွးကြပြီ…” လို့ ပြောကြသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း လေးလံတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ကားပေါ်က ဆင်းသက်..အိမ်ဆီကို လျောက်လာပြီး အိမ်တံခါးက ဘဲလ်ခလုပ်လေး ကို နှိပ်လိုက်သည် ။ တင်တောင် တင်တောင် ဆိုတဲ့ အသံလေး မြည်ပြီး မကြာခငမှာ တံခါးပွင့်လာသည် ။ ထွေးထွေးရီရဲ့ ပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာလေး ပေါ်လာသည် ။ “ အကိုကြီး ရေ..၀မ်းသာစရာ တွေ့ရမယ်…ဟောဒီမှာ ကြည့်စမ်း..ဘယ်သူတွေ ရောက်နေသလဲ ဆိုတာ….” လို့ ပြောပြီး ဧည့်ခန်းက ဆိုဖါတွေ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ မိန်းမတယောက်နဲ့ ကလေးလေး တယောက်ကို ပြလိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ခင်…ခင်နှင်းဆီ……” ထွေးထွေးရီက “ ဟုတ်တယ်..အကိုကြီး…အကိုကြီး ပြန်တွေ့ချင်နေတဲ့ ခင်နှင်းဆီနဲ့ အကိုကြီးရဲ့ သမီးလေး….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ မိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ပြီးပါပြီ